Weerarkii Elite hotel oo lasoo afjaray | KEYDMEDIA ONLINE
Weerarkii Elite hotel oo lasoo afjaray
Waxay ku qaadatey Ciidamada dowladda inay kusoo afjaraan weerarka mudo 4 saac ka badan, iyagoo toogtay dhamaan dableyda katirsan Al-Shabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa caawa saacaddu markay ahayd 10:00 p.m. [Afar saac oo habeenimo] lasoo afjaray weerar xoogan oo ka dhacay hotel-ka Elite oo ku yaalla Xeebta Liido, ee magaaladda Muqdisho.
Mas'uul katirsan Wasaaradda Warfaafinta, ayaa u xaqiijiyay Keydmedia Online in la dilay dhamaan kuwii ku jiray gudaha, oo lagu qiyaasay 4 illaa 5, waxaana tirakoob lagu hayaa tirada dadkii dhintay iyo kuwa dhaawaca ah.
Waxaa dadka dhintay ku jira Agaasimihii xiriirka gobollada ee Wasaaradda Warfaafinta C/risaaq Cabdi, oo goobta ku sugnaa, iyadoo dadka lasoo badbaadiyay uu kamid yahay milkiilaha hotel-ka Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo Baarlamanka katirsan.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka, oo kusoo beegmaya xili dalka uu ku jiro marxlad kala guur ah, oo Madaxdii qaranka ku mashquuleen arrimaha doorashooyinka, iyagoo dayacay amniga.